Qubanaha » Madaxweynaha oo ka hadlay tacadiyada Amisom rayidka u gaystaan.
Madaxweynaha oo ka hadlay tacadiyada Amisom rayidka u gaystaan.
Apr 23, 2017 - jawaab
Madaxweynaha Somaliya ayaa wuxuu ka hadlay tacadiyada ciidamada Midowga Afrika Amisom ay ka gaystaan Magaalada Muqdisho, sidoo kalena ay u gaystaan dadka rayidka ah.
Madaxweynaha Somaliya ayaa ku tilmaamay arin aanan la aqbali karin tacadiyada bareerka ah oo ciidamada Amisom ay ka gaystaan Magaalada Muqdisho, isaga oo sheegay tacadi kasta oo Amisom ay gaysato in lagala xisaabtamaayo.
Farmaajo wuxuu sheegay in Hay’addaha ammaanka ay gacanta ku soo dhigeen askari ka tirsan ciidamada Amisom oo dhawaan qof shacab ah ku jiiray Isgoyska Afarta Jardiin, kadibna isku dayay inuu baxsado, laakiin ugu dambeyn gacanta lagu soo dhigay.
“Runtii wax laga xumaado waaye arintaasi arin fiican ma’ahan waan ka hadalnay askarigii fuliyay arintaasina waad og tihiin in la qabtay, waxaana uga digeynaa qof waliba inay ka taxadaraan arintaan oo kale.” Ayuu yiri Madaxweynaha Somaliya.
Wuxuu sheegay Madaxweyne Farmaajo inay suuragal tahay gaadiidka Amisom inay gaystaan shil aanan ku talo gal aheyn, balse si kama ah u dhaca, laakiin muhiimada ay tahay mar kasta in muwaadinka Somaliyed dhiigiisa uu yahay mid qaali ah.
“Waa ay dhici kartaa shil bini’aadan ayaa la yahay, laakiin marnaba ma ogolaaneyno arin ku talo gal ah, maxaa yeelay dadkeena dhiigiisa iyo nafteena waa qaali, Amisom sida aan ognahay runtii 10-sano ayeey nala joogeen, iyaga laftooda kuwa badan oo ka mid ah naftooda ayeey ku waayeen runtii inay difaacaan dowladnimada Somaliya.” Ayuu yiri Madaxweyne Farmaajo.
Ciidamada Amisom ayaa Muqdisho ka gaystay dhawr mar falal tacadi ah oo loo gaystay dadka rayidka ah, iyaga oo gaadiidka Amisom tixgelin aanan siinin rayidka marka ay gaystaan falalka dhibaatooyinka rayidka ah.